Shiinaha Double duray wax taaj oo kale saaraha iyo qeybiye | Meesha
Wax taaj oo kale duray Double waa nidaam balaastig ah oo balaastig ah oo laba nooc oo wasakhahaasi isku mar lagu durayo isla mashiinka irbad si loo sameeyo qayb ka mid ah laba qalab caag ah oo kala duwan.
Wax taaj oo kale duray Double (waxaa sidoo kale loo yaqaan biqil shot laba jeer, duro laba-midab).
Mashiinka la isku duro ee laba-ciribtirka ah ayaa ah geedi socod balaastig ah oo laba nooc oo wasakh ah isla mar ahaantaana lagu durayo isla mashiinka irbadda si loo sameeyo qayb ka mid ah laba qalab caag ah oo kala duwan. Mararka qaarkood labada maadadood waa midabbo kala duwan, marmarka qaarkoodna laba maaddo ayaa ka mid ah adkaansho iyo jilicsanaan kala duwan, sidaas awgeed helitaanka aaladaha farsamo ee loo baahan yahay iyo sharraxaadda sheyga.
Codsiga caaryada balaastigga ah ee la isku duro iyo qaybo
Qaybaha balaastigga ah ee la soo saaray inkasta oo wax lagu shaabadeeyo laba-cirbadood ayaa si weyn loogu isticmaalay alaabada elektarooniga ah, aaladaha korantada, alaabada caafimaadka, qalabka guryaha, alaabada ay ku ciyaaraan iyo dhamaanba baagagga kale ee caagagga ah. Soo-saarista iyo wax-ka-samaynta caaryada laba-midab leh, iyo sidoo kale cilmi-baarista iyo horumarinta mashiinnada wax lagu durayo ee labada midab leh iyo alaabta ceyriinka ah ee wax lagu duro ee labada-midab leh ayaa sidoo kale si deg deg ah u horumaray.
Muuji kiis laba qaybood oo duritaan ah
Laba nooc oo balaastik ah ayaa la isticmaalaa, iyo badeecooyinka balaastigga ah ee si cad loogu kala saari karo labada nooc ee balaastigga ah waxaa loo yaqaanaa qaybo laba-cirbadood ah.
Waa maxay faa'iidada wax taaj oo kale duray double?
Marka la barbar dhigo wax taaj oo kale duro, habka wax taaj oo kale co-duro wax-qabad leeyahay faa'iidooyinka soo socda:
1. Lakabyada gudaha iyo dibaddaba waxay qaataan waxyaabo kala duwan oo leh astaamo kala geddisan, sida kuwa awoodda wanaagsan ku leh lakabka gudaha iyo kuwa midab ama hadhuudh ku leh dusha sare, si loo helo waxqabad dhammaystiran iyo muuqaal muuqaal ah.
2. Isuduwidda qalabka jilicsan-adag: Qaybta ugu weyn ee qeyb ka mid ah waxay isticmaashaa qalab adag, dusha sare ee isku imaatinka iyadoo la adeegsanayo cusbada jilicsan ee jilicsan (TPU, TPE) waxay ku ciyaari kartaa saameyn aad u wanaagsan oo wax soo saar ah oo ku saabsan badeecada, sida biyuhu, boorka-caddeyn la'aan.
3. Marka loo eego astaamaha adeegsiga ee kaladuwan, sida lakabka sare ee qaybaha culus wuxuu isticmaalaa cusbi jilicsan oo jilicsan, jirka ama xudunta qaybta waxay isticmaashaa cusbi adag oo balaastik ah ama caag xiiran leh ayaa yareyn karta culeyska.
4. Maaddooyinka aasaasiga ah ee tayada-hooseeya ayaa loo isticmaali karaa in lagu yareeyo kharashka.
5. Qalabka aasaasiga ah ee qaybaha ayaa isticmaali kara waxyaabo qaali ah oo qaas ah dusha sare, sida faragelinta ka hortagga elektromagnetic, habdhaqanka sare iyo walxaha kale si loo kordhiyo wax soo saarka wax soo saarka.
5. Dusha sare ama xudunta qaybaha waxaa laga samayn karaa waxyaabo qaali ah oo leh astaamo gaar ah, sida faragelinta ka hortagga elektromagnetic, habdhaqanka sare iyo walxaha kale si loo kordhiyo wax soo saarka wax soo saarka.
6. Isku-darka saxda ah ee qalabka kortikal iyo xudunta ayaa yareyn kara walbahaarka haraaga ah, wuxuu kordhin karaa xoogga farsamada ama sifooyinka dusha sare ee qaybaha.
7. Marka loo barbardhigo isku shaandhaynta xad dhaafka ah, waxay ku leedahay faa iidooyin waaweyn xagga tayada, qiimaha iyo wax soo saarkaba.
Nusqaamida wax taaj oo kale oo la isku duro
1. Waa lagama maarmaan in la maalgashado soo iibinta mashiinka wax lagu duubo ee laba-cirbadood ah.
2. Isku-dheelitirka qaab-dhismeedka laba-cirbadoodka ah wuxuu u baahan yahay sax: qaab-dhismeedka dambe ayaa leh shuruudo isku mid ah. Marka sheygu isbeddelo naqshadeynta, labada caaryaarba waa inay isbedelo isku mid ah sameeyaan si isku mid loo hubiyo. Tani waxay ku kordhinaysaa culeyska shaqada dayactirka dadka dhinta.
3. Mashiinka wax lagu duubo ee la isku duro oo labalaab ah ayaa ah in laba nooc oo wasakhaha ah ay wadaagaan booska iyo awooda isla mashiinka wax lagu duro, sidaas darteed alaabada baaxada weyn lama duri karo.
Farqiga u dhexeeya habka wax taaj oo kale duro duritaanka double iyo habka overmolding
Wax taaj oo kale duro iyo overmolding labaduba waa wax taaj oo kale duray labaad, laakiin iyagu waa kuwo aad u kala duwan.
1. Qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka xad-dhaafka ah, oo sidoo kale loo yaqaanno wax-ka-beddelka labaad, ayaa lagu sameeyaa mashiinnada wax lagu duro ee cirbadeynta caadiga ah. Shayga waxaa loo sameeyay laba marxaladood. Ka dib marka badeecada laga saaro hal nooc oo wasakhahaasi ah, waxaa lagu ridayaa xirmo kale oo wasakh ah oo loogu talagalay mideynta muditaanka labaad. Sidaa darteed, mashiinka wax taaj oo kale duray caadiga ah waxaa loo isticmaalaa habka overmolding.
2. Mashiinka la isku duro ee laba jibbaaran ayaa ah in laba nooc oo walxo caag ah lagu durayo isla mashiinka wax lagu durayo, isla markaana sameysmaya laba jeer, laakiin badeecadu hal mar un bay soo baxaysaa. Guud ahaan, noocan ah geedi socodka wax taaj oo kale ayaa sidoo kale loo yaqaannaa wax taaj oo kale duritaanka wax double, kaas oo sida caadiga ah waxaa dhameystiray laba nooc oo wasakhahaasi oo u baahan mashiin gaar ah oo wax taaj oo kale duray double.
3. Wax taaj oo kale duray Double waa hab joogto ah wax soo saarka. Ma laha wax hawlgal ah oo ka mid ah soo bixidda iyo dhigista qaybo dhexe, waxay badbaadisaa waqti iyo qalad dib-u-dhigista qaybo, waxay si weyn u yareysaa heerka wax-soo-saarka liita, waxayna si weyn u hagaajineysaa tayada wax soo saarka iyo wax-soo-saarka wax-soo-saarka marka la barbar dhigo hannaanka xad-dhaafka ah.
4. Nidaamka xad-dhaafka ah wuxuu ku habboon yahay cirbadeynta alaabooyinka leh baahiyo tayo hoose leh iyo amarro yaryar. Ku xaddidan qeexitaannada mashiinka wax lagu duubo ee laba-cirbadeyn ah, guud ahaan kuma haboona marinta duritaanka qaybaha waaweyn.
5. Labada wasakh ee hore ee wasakhda laba-cirbadoodka ah waa inay noqdaan kuwo isku mid ah, oo wasakhda goosgoosku ma lahan shuruuddan. Sidaa darteed, saxsanaanta iyo qiimaha wasakhda la isku duro ee labada laaban ah ayaa ka sarreysa tan caaryada irbadaha ku duugan.
Tilmaamaha habka wax taaj oo kale ee laba-cirbadood ah:
1. In geeddi-socodka laba-cirbadda wax taaj oo kale duray, waxaa jira afarta cunsur muhiim ah: mashiinka wax taaj oo kale ah oo la isku duro, laba-irbad duro, wax caag ku habboon iyo qayb ka mid macquul ah design.
2. Xulashada Waxyaabaha Mindhicirka iyo Labiska adag ee laba-cirbadaha Mindhicirku Waa inuu jiraa kala duwanaansho heerkul gaar ah oo u dhexeeya barta dhalaalka ee laba nooc oo qalab ah oo loogu talagalay wax isku shaandheynta labada midab leh. Guud ahaan, waxaa lagugula talinayaa in barta dhalaalka ee maaddada koowaad ee irbaddu ay ka sarreyso tan maaddada labaad ee duritaanka, iyo in barta dhalaalaysa ee maaddada ugu horreysa ay ka sarreyso tan maaddada labaad ee irbadda.
3. Isku xigxiga duritaanka ee maaddooyinka hufan iyo kuwa aan daah-furneyn: tallaalka koowaad wuxuu ka sameysan yahay waxyaabo aan daah-furneyn, tallaalka labaadna wuxuu ka sameysan yahay waxyaabo hufan. Tusaale ahaan, maaddooyinka aan daah-furneyn badanaa waa PC oo leh heer-kul heer sare ah, iyo PMMA ama PC ayaa loo isticmaalaa walxaha hufan ee labaad. PC wuxuu u baahan yahay in lagu ilaaliyo ku buufinta UV. PMMA waxay dooran kartaa UV ama adkaansho. Haddii ay jiraan jilayaal dusha sare, waa inay doortaan UV.
Waa maxay mashiinka wax taaj oo kale ah oo la isku duro?
Mashiinka wax lagu duro ee duritaanka oo leh laba foosto iyo nidaamka duritaanka iyo habka beddelka booska ee caaryada waxaa loo yaqaan mashiinka wax lagu duubo ee laba-cirbadaha ah, kaas oo loo adeegsado isku shaandheynta cirbadeynta laba-midab leh. Mashiinnada wax lagu duro ee duritaanka sida caadiga ah waxay leeyihiin laba nooc: mashiinka wax isku duro oo isku mid ah oo iskula jira oo leh fur irbad iyo mashiinka wax ku duro toosan oo duritaanka leh oo lagu maroojiyo.
Waa maxay caaryada la isku duro?
Caaryada lagu durayo laba nooc oo balaastig ah oo isku xigxiga soona saaraya alaab laba midab leh waxaa loo yaqaan caaryada laba-midab leh. Qaababka la isku duro ee labada midab ah ayaa badanaa ah laba nooc oo wasakheys ah oo qayb ka mid ah, oo u dhigma tallaallada koowaad iyo labaad siday u kala horreeyaan. Geerida dambe (labka dhinta) labada dhimatay waa isku mid, laakiin dhinta hore (dhimashadu haweenku) way ka duwan tahay.
Qaababka laba-cirbadoodka ah waa in lagu dhejiyaa mashiinka wax lagu duubo ee laba-cirbadood ah si loo soo saaro si caadi ah.
Talooyin ku saabsan naqshadeynta Caaryada laba-cirbadoodka ah
1. Xudunta caarada iyo saabka
Qaybta sameynta ee caaryada laba-cirbadaha ah asal ahaan waxay la mid tahay tan caaryada guud ee irbadda. Farqiga ayaa ah in feerka caaryada duritaanka ee laba boos waa in loo tixgeliyaa inay isku mid yihiin, iyo caaryada iskudarsan waa inay si fiican ulashaqeeyaan labada feer. Guud ahaan, noocyada caagga ah ee noocan ahi way yar yihiin.
MUDO laba-cirbadood ah
2. Qalabka Ejection
Maaddaama qaybaha balaastigga ah ee labada-midab keliya la demin karo kadib duritaanka labaad, habka demouldinging ee aaladda irbadda asaasiga ah ma shaqeyn doonto. Mashiinka cirbadeynta ee wareegga ah, habka foosha ee mashiinka cirbadeynta ayaa loo isticmaali karaa ka saarida ejection. Mashiinka cirbadeynta ee wareegga toosan, habka ka saarida ejection ee mashiinka duritaanka looma isticmaali karo. Habka ejection ejection ejection ejection ejection ejection ejection-ka ayaa lagu dhejin karaa miiska wareega.
3. Nidaamka Qiimeynta
Sababtoo ah waa wax isku shaandheyn laba-cirbadood ah, nidaamka qolku wuxuu u qaybsan yahay hal nidaam cirbad iyo mid duritaan labaad ah, oo ka kala socda laba aaladood oo wax lagu duro oo wax lagu duro.
4, Isku-dheelitirnaanta saldhigyada caaryada Maxaa yeelay habka wax-ka-qabashada laba-cirbadoodgu waa mid gaar ah, waxay u baahan tahay iskaashi iyo is-waafajin midba midka kale, sidaas darteed cabbirka iyo saxnaanta labada lammaane ee qalabka hagidda dhimashadu waa inuu ahaadaa mid iswaafaqsan. Wixii wasakh ah cirbadyada duritaanka ee wareega, dhererka xidhmooyin ee wasakhahaasi waa inuu ahaadaa mid isku mid ah, bartamaha labada wasakhna waa inay ahaataa isla isla wareega wareega, farqiguna waa 180. Mashiinka wax lagu duro ee durbaanka ah ee wareega, laba nooc oo wasakh ah waa inuu ahaadaa isla dhidibka.
Horumarinta wax taaj oo kale duray
Laga soo bilaabo astaamaha iyo codsiyada wax isku dhejinta midabbada badan iyo labada wax ee wax wada qabsiga, waxaa loo arki karaa inay jiri doonto isbeddel si tartiib tartiib ah loogu beddelo habka wax taaj oo kale ee duritaanka ee mustaqbalka. Tiknoolajiyada wax lagu nadiifiyo ee cusubi ma aha oo kaliya inay hagaajiso saxnaanta habka wax taaj oo kale ee duritaanka, laakiin sidoo kale waxay furaysaa berrinka habka wax taaj oo kale ee duritaanka. Qalabka ejection casriyeynta iyo geeddi-socodka ayaa ku filan si loo daboolo baahida sii kordheysa ee alaabada kala duwan, tayo sare leh iyo qiimo sare lagu daray.
Mestech waxay ku siisaa moldinnng laba cirbadood oo ku saabsan kiisaska gawaarida, qolofka qalabka gacanta, guryaha ku hadla, badhannada furaha, gacmo-qabadka iyo waxyaabo kale oo laba-midab leh ama laba shey ah muddo sannado ah, fadlan nala soo xiriir haddii aad u baahan tahay.
Hore: Mashiinka la isku duro
Xiga: Qaybaha caaga ah ee laambad aan hadh lahayn
Ku shaqeynta boostada dusha sare ee qaybaha balaastigga ah
Guryaha balaastigga ah ee ku hadla codka
Wax taaj oo kale duray caag ah
Qaybaha caaga ah ee laambad aan hadh lahayn